OBAMA iyo Afar Sano oo kale!! (Warbixin) | Shabakada Alshahid
OBAMA iyo Afar Sano oo kale!! (Warbixin)
Added by Webmaster on November 7, 2012.
Saved under Faaqidaad, Muuji, Warar, Warbixin
Sawir keyd ah
Washington (Alshahid)- Doorashadii madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa sida lagu waramayo soo dhamaatay ka dibmarkii ay Saacadihii lasoo dhaafay si xowli ah halkaas uga soconaysay.
Natiijooyinka hordhaca ah waxay sheegayaan in Barack Obama oo ah madaxweynaha iminka talada dalkaasi haya uu ku guuleysta Doorashada . waxaana guul dareystay Musharaxa Xizbiga Jamhuuriya Mr. Mitt Romney oo isaga la tartamayay.
Warbaahinta Mareykanka ayaa tira-koob ku samaysay Codadka hordhaca ah ee la kala helay, waxayna sheegtay inuu Obama helay Cod lagu qiyaasay 303, halka Romney uu isna helay 203 Cod. Waxaana guud ahaan Codadka la rabay inuu Murashaxa guuleystay helo ay ahayd 270 Cod.
Obama ayaa wax-qabad muhiim ah sameeyay waqtigii lasoo dhaafay ee uu Xilka hayay. Waxaana ku jiray howlahaas uu xaqiijiyay bad-baadinta Warshadaha sameeya Baabuurta iyo dilkii Usama Binu Ladino o ahaa Maskaxdii soo abaabushay Weeraradii 11 September 2001-da lagu qaaday Mareykanka.
Arrimahaas ayaa loo malaynayaa inay Obama u sahleen kusii nagaashada Aqalka Cad ee dalka Mareykanka si uu waqti cusub oo 4 Sano ah u hogaamiyo dalkaas.
Hadal ayuu maanta ka jeediyay xarunta Xizbiga Dimoqoraadiga oo uu isagu ka tirsanyahay uu ku leeyahay Magaalada Chicago. Waxaana Hadalkan uu ahaa Khudbadda guusha Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo Obama uu dadka kula hadlayay.
Ugu horeyntii wuxuu Khudbadiisa ugu hambaliyeeyay Murashaxii isaga la tartamayay ee ka socday Jamhuuriga Mitt Romney sida uu u wajahay Ololihiisii xooga lahaa ee doorashada.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale u mahadceliyay dadka Mareykanka ah ee isaga mar labaad u doortay xilka madaxtinimada dalkaas.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray inuu isagu la xiriiray Mitt Romney-gii tartanka kula jiray iyo ku xigeenkiisii Paul Rayan, isla markaana uu labadoodaba ugu hambaliyeeyay ololahoodii awooda badnaa.
“Waxaa laga yaabaa inaan galnay dagaal adag, sababtuna waxay tahay waxaan jeceyl u qabnaa dalkeena, waxaanan xambaarsannahay Hami aan dalka u heyno” ayuu sii yidhi.
Ku xigeenkiisa Mr. Joe Biden ayuu mahadcelin xoog leh u jeediyay. Wuxuuna ku sheegay inuu yahay dagaalyahan Ameerikaan ah. Sidaas si la mid ahna Obama ayaa u mahad naqay xubnaha Ololihiisa oo iyagu dadaal dheer bixiyay.
“Waxaan u doonaynaa dalkeena inuu horumar sameeyo isagoo nabad ah. Waxaana doonaynaa inuu meel wanaagsan oo soo jiidasho leh ka galo Caalamka”ayuu mar kale yidhi madaxweyne Obama.
“Waxaan u shaqaynaynaa markan si loo helo Mustaqbal wanaagsan oo dhamaanteen na sugaya” ayuu yidhi.
Madaxweynaha mar kale guuleystay ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay inuu rajaynayo wada shaqayn dhex marta Xizbiyada Dimoqoraadiga iyo Jamhuuriga ee dalkaas si loo yareeyo Miizaaniyadda Xukuumadda loona hagaajiyo Shariga Canshuuraha iyo Habka Socdaalka.
“Waxaan nahay Qoys Mareykan ah. Waxaan sare iyo hoosba isula soconaynaa si isla mid ah inagoo ah dowlad mid ah” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Mr. Obama ayaa tibaaxay inay jirto baahi loo qabo xal dhex-dhexaad ah si uu dalku horay ugu dhaqaaqo ka dib markii uu isagu ka adkaatay Murashaxii Jamhuuriga ee Mitt Romney oo doorashada qayb ka ahaa.
Obama wuxuu hoosta ka xariiqay inuu wada-hadal la samayn doono Romney si ay uga tashadaan qaababka loo wada shaqayn karo iyadoo loo danaynayo horumarka dalka.
Dhankiisana Mitt Romney ayaa sida Hab Maamuuska dalka Mareykanka uu yahay wuxuu Khudbad jeediyay ka hor inta aanu Obama hadlin. Wuxuuna ugu hambaliyeeyay madaxweynaha Mareykanka Obama guusha uu mar kale guuleystay.
Romney wuxuu Ololihiisi doorashada ku sheegay mid mudan in loo tahniyadeeyo. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay “ Waan u tahniyadeeyay isaga iyo Marwada Koobaad ee dalka Mishel Obama iyo Labadiisa Gabdhoodba”.
Murashaxa Jamhuuriga ee guul dareystay wuxuu xusay in waqti aad u caqabad badan iminka lagu jiro. Isagoo rajo ka muujiyay in Madaxweynaha dalku uu horumar keeni doono. Sidoo kalena wuxuu Romney u mahad naqay Paul Rayan oo isaga ku xigeen u ahaa, kaas oo sida uu sheegay dadaal dheer u bixiyay Ololahooda iyo dalkaba.
Waxaa la leeyahay, Obama guushiisu waxay u horseedi doontaa inuu kusii socdo fulinta Qawaaniin ku salayasn hagaajinta Taakuleynta Caafimaadka iyo dhanak maaliyadda. Taasna waxay sii kordhinaysaa Canshuuraha laga qaado dadka Maal-qabeenka ah si loo yareeyo Gaabiska dhaqaale ee jira.